Ingabe indawo eyomile kunazo zonke emhlabeni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - SETI
Siphila kwiplanethi lapho kukhona konke: izifunda lapho imvula kakhulu kuze kube seqophelweni lokuthi izikhukhula zingenye yezinkinga ezinkulu, ezinye lapho liyana khona ngokulingene, nezinye lapho lingawi ngaphezu kwamasentimitha ambalwa ... hhayi zonke iminyaka. Lezi zinhlobonhlobo zezindawo nezimo zezulu zenza umhlaba ube yikhaya eliyisimanga.
Kodwa, Wake wazibuza ukuthi ilana kancane kuphi? Uma kunjalo, ungaphuthelwa yilo mbhalo. Ake sithole ukuthi iyiphi indawo eyomile kunazo zonke emhlabeni.
Indawo eyomile yiMaría Elena Sur (INYANGA). Kutholakala esifundeni saseYungay, ogwadule lwase-Atacama (eChile), i-MES iyindawo eyomile emhlabeni. Ngomswakama ojwayelekile womkhathi (RH) we-17,3% kanye ne-RH emhlabathini ene-14% engaguquki ekujuleni kwemitha elilodwa, singacabanga ukuthi impilo ayikwazi ukusinda lapha ... kepha ngabe senza iphutha.
Izici zalesi sikhombisi zifana nalezi zeplanethi yethu eyakhelene nayo, iMars, kepha ososayensi bathole amagciwane ahlala kulezi zimo ezimbi kakhulu, ngokwemininingwane eshicilelwe ephephabhukwini i-Environmental Microbiology Reports.
Isithombe - Armado Azúa-Bustos
Lawa ma-microorganisms atholakala kumasu we-biology biology angasisiza ukuthi siqonde ubudlelwano phakathi kokuphila namanzi. Hhayi nje kuphela ukuthi basinda esifundeni esomile kunazo zonke emhlabeni, kepha futhi banokubekezelela okuphezulu emisebeni ye-ultraviolet.
Uma kukhona impilo ENYANGA, kungaba khona yini ukuphila kwiMars? Yebo kungenzeka. Usosayensi waseChile u-Armado Azúa-Bustos uthe "uma kukhona indawo efanayo eMhlabeni lapho sithole khona ama-microorganisms asebenzayo, izimo zokutholakala kwamanzi zibonakala zingakhawuleli impilo kwi-Mars," okumangazayo, akunjalo? ucabanga kanjalo?
Ukuqonda izisekelo zamangqamuzana okubekezelela okuphezulu kwesomiso kungasisiza ukuthi sakhe izitshalo ezingamelana kakhulu, ngakho-ke ngubani owaziyo, mhlawumbe singaba nezihlahla zezithelo noma izitshalo zensimu ezingadingi amanzi amaningi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Iyiphi indawo eyomile emhlabeni
IKiribati, iziqhingi ezinganyamalala ngaphambi kuka-2100
Isithombe nevidiyo: Izibani zaseNyakatho ezikhangayo eCanada